Boeing 737 Max tsy azo antoka? Lozam-pifamoivoizana 2, zotram-piaramanidina 62 atahorana?
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Boeing 737 Max tsy azo antoka? Lozam-pifamoivoizana 2, zotram-piaramanidina 62 atahorana?
Hatraiza ny maha-azo antoka ny vaovao Boeing 737 Max 8? Fanontaniana ara-dalàna apetraka eo am-pikarohana sy fanavotana mandroso ny asa any Etiopia aorian'ny fianjeran'ny fiaramanidina Ethiopian Airlines ankehitriny.
Ity ny sehatry ny varotra: Ny 737-800 dia manome fahatokisana ambony, fahombiazan'ny solika ary fiverenana sarobidy avo lenta izay takian'ny mpandraharaha amin'ny tsenan'ny fifaninanana ankehitriny. Ny fahaizany miavaka sy ny fikojakojana ambany ary ny vidin'ny asa dia manome sisiny mifaninana na inona na inona modely na tsena.
Ireto ny zava-misy: Ny zotram-piaramanidina lehibe indrindra miasa amin'ity karazana fiaramanidina ity dia ny Southwest Airlines. Fa maninona no nilaza ny Southwest Airlines a vonjy taitra fikolokoloana araka ny notaterina tamin'ny eTurboNews?
Boeing 737 Max 8, fiaramanidina vaovao iray vaovao nianjera taoriana kelin'ny niaingany avy tany Addis Ababa androany maraina tamin'ny 10 martsa 2019 namono ny 157 rehetra tao anaty sambo. Tamin'ny 29 Oktobra 2018, Boeing 737 Max 8 vaovao no niasa tahaka Lion Air Flight 610 nianjera ihatrany amin'ny Ranomasin'i Java taoriana kelin'izay dia niainga ny famonoana olona koa tao anaty sambo, olona 189.
Nofoanan'ny Lion Air ny baiko $ 22 miliara ho an'ny Boeing 737 Max 8. Nanaraka i Qatar Airways, saingy nanapa-kevitra ny hijanona amin'ny fifanarahana miaraka aminy Boeing ho an'ny 60 eo ho eo 737-800 MAX fiaramanidina.
Tamin'ny sidina vao haingana indrindra talohan'ny fianjerana, avy any Denpasar any Bali ka hatrany Jakarta, nisy mpanamory fiaramanidina Lion Air namoaka antso "Pan Pan" - famantarana maika izay ambaratonga iray eo ambanin'ny "Mayday". Nilaza ny mpiasa fa niasa tamin'ny toe-javatra tsy mahazatra ny fiaramanidina noho ny tsy fahombiazan'ny fitaovana.
Ny lozisialy fikojakojana ny sidina an'habakabaka amin'ny Lion Air dia naneho olana enina efa hita tao amin'ny fiaramanidina nanomboka ny 26 Oktobra, ao anatin'izany ny lesoka amin'ny fisidinan'ny haingam-pandeha sy ny haavon'ny haavo.
Manahy ny indostrian'ny fiaramanidina manerantany, farafaharatsiny ao ambadiky ny sehatra. Ireto sidina ireto dia miasa fiaramanidina Boeing Max 8 amin'izao fotoana izao.
Ity misy lisitr'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy ny isan'ny Max 8 milahatra na miasa.
Seranam-piaramanidina Andrefana: 250
Sambo Air Norvezy: 110
Kapitalin'ny fiaramanidina SMBC: 91
Vondron'orinasa renivohitra: 70
Banky fampandrosoana China: 68
Seranam-piaramanidina Tiorka: 65
Vondrona TUI: 54
Fiaramanidina etiopiana: 30
Rivotra Koreana: 30
Seranam-piaramanidina Donghai: 15
Airlines Airlines: 15
Aerolinas Argentina: 11
Mpanolotsaina amin'ny fampiasam-bola any Japon: 10
Manga manga: 6
Seranam-piaramanidina Shenzhen: 5
Seranam-piaramanidina Hainan: 3
Midira amin'ny rivotra: 2
Rivotra 9: 1
International Mauritania Airlines: 1
Boeing dia namoaka fanambarana androany nilaza fa: Fantatry ny Boeing ny tatitra momba ny lozam-pifamoivoizana iray ary manara-maso akaiky ny zava-misy izy.
Raha ny raharaha Lion Air araka ny tatitra mialoha dia nitohy ny olana.